State Counsellor in Canberra – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi arrived in the Australian capital of Canberra yesterday and was welcomed by Prime Minister Malcolm Turnbull.
As the State Counsellor arrived at the Parliament House in Canberra, the guard of honour fireda19-gun salute and saluted her.
The State Counsellor then signed the guest book and was escorted by PM Turnbull into the guest hall of Parliament House. The State Counsellor and PM Turnbull then tookacommemorative photograph together.
Later, the State Counsellor attended the Myanmar-Australia bilateral meeting in the Parliament Hall. Accompanying the State Counsellor were Union Ministers U Thaung Tun and U Kyaw Tin, Myanmar Ambassador to Australia U Tha Aung Nyunt and other officials.
Myanmar and Australian leaders talked about developing bilateral relations, the Rakhine situation and how Australia could contribute to making the situation better.
The State Counsellor then met with Bill Shorten, leader of the Australian Labour Party, which is the opposition party in the Australian Parliament. They discussed Myanmar’s democratic transition and also talked about developing bilateral relations and the Rakhine situation.
Later, the State Counsellor and her entourage travelled to the National Arboretum, where the State Counsellor plantedaPinus roxburghii (Chir Pine) in honour of Myanmar-Australia relations. This was followed by the State Counsellor meeting with Myanmar citizens living in Australia at the Albert Hall, Canberra. The State Counsellor explained the reforms taking place in Myanmar, the peace process and national reconciliation, the situation in Rakhine and how Myanmar expatriates could help contribute to making it better.
The State Counsellor then answered questions raised by the attendees at the ceremony. Myanmar’s Ambassador to Australia U Tha Aung Nyunt then handed over the donation money collected from the Myanmar community in Australia to the State Counsellor for humanitarian assistance in Rakhine.
Later that night, Union Minister for the Office of the Union Government U Thaung Tun, and Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin attendedadinner hosted by Aust-Cham (Australia Chamber of Commerce) member companies, which are investing in the various sectors in Myanmar, at the Hyatt Hotel. At the event, the Union Ministers explained about Myanmar’s political and socio-economic development and then answered questions posed by Australian companies
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားနှင့် မြန်မာ – ဩစတြေးလျ နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဩစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မဲလ်ကွန်တန်ဘဲလ်က ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီတွင် ကင်ဘာရာမြို့ရှိ ဩစတေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဝင်းအတွင်း ကျင်းပသည်။
ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဩစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မဲလ်ကွန် တန်ဘဲလ်က ခရီးဦးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။
ထို့နောက် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့က အမြောက် (၁၉)ချက် ပစ်ဖောက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကို ခံယူပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို စစ်ဆေးကာ နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များက နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား အပြန်အလှန်မိတ်ဆက် ပေးကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဝန်ကြီးချုပ် မဲလ်ကွန်တန်ဘဲလ်တို့သည် ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ လွှတ်တော်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဧည့်ခန်းမ၌ သီးသန့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မဲလ်ကွန်တန်ဘဲလ်နှင့် မှတ်တမ်းတင်၏ ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဩစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်တို့သည် လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ မြန်မာ – ဩစတြေးလျ နှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် ဦးကျော်တင်၊ ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင်းလင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဩစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ အတိုက်အခံ လေဘာပါတီခေါင်းဆောင် Mr. Bill Shorten နှင့် တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်ရေး အလားအလာများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် National Arboretum သို့ ရောက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာ-ဩစတြေးလျ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ် အထိမ်းအမှတ် Pinus roxburghii (chir pine) ပင်ကို စိုက်ပျိုး ပေးသည်။
ညနေပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် Albert Hall ၌ ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေကြသည့် မြန်မာအသိုက်အဝန်းနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ပါဝင် ကူညီပံ့ပိုးရေး မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသူများ၏ မေးမြန်း ချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ ဩစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံမတ်ကြီး ဦးသာအောင်ညွန့်က ဩစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းမှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ ပေးရေးအတွက် လှူဒါန်းသည့် အလှူငွေများကို ပေးအပ်လှူဒါန်းသည်။
ညပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ထားကြသည့် ဩစတြေးလျကုန်သည်ကြီးများ အသင်းဝင် ကုမ္ပဏီကြီးများက တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။
အဆိုပါ ညစာစားပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် ဦးကျော်တင်တို့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားကြပြီး တက်ရောက်လာကြသည့် ဩစတြေးလျစီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီး များ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။